अमेरिका सेरोफेरो – Page 320 – NepalayaNews.com
चलचित्र “बाटो मुनिको फूल-२” न्युयोर्कमा च्यारिटी शो गरिने २५ असार २०७३, शनिबार ०५:४३
डालस टेक्सासमा गोलि चल्यो, ५ पुलिसको मृत्यु २४ असार २०७३, शुक्रबार १६:३२
असार २४, डालस, अमेरिका । अमेरिकाको डालसमा भएको विरोध प्रदर्शनमा गोली चल्दा ५ प्रहरी मारिएका छन् । प्रदर्शनमा एक गैरसैनिक घाइते भएको जनाइएको छ । प्रहरी हिंसाविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीकै बीचबाट गोली चलेको बताइएको छ । स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरुका..
ट्याक्सीमा यात्रुले छोडेको पौने २ लाख डलर फिर्ता २४ असार २०७३, शुक्रबार १६:१०
बोस्टन, अमेरिका, २४ असार । तपाईंले मोटो रकम बेवारिसे अवस्थामा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? नेपालमा पनि यस्ता बेवारिसे पैसा फिर्ता भएका घटना यदाकदा सुनिँदै आएका छन् । अमेरिकामा पनि यस्तै घटना भएको छ । अमेरिकाको बोस्टन सहरमा ट्याक्सी चलाउँदै आएका रेमन्ड..
जनसम्पर्क समितिअमेरिकाले रकम हिनामिना नगरेको विष्टको दावी २३ असार २०७३, बिहीबार १६:२८
असार २३ न्युयोर्क । नेपाली जनसम्पर्क समिति,अमेरिकाका सभापति आनन्द विष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे गत वर्ष भूकम्प पीडितहरुको सहयोगका लागि संकलन गरेको रकम हिनामिना गरेको भन्दै विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक भएका समाचार र..
कोरियाली नेता किम जोङ सहित १० जनाविरुद्ध अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध २३ असार २०७३, बिहीबार १६:०९
काठमाडौं, असार २३ । अमेरिकाले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ सहित १० जना उत्तर कोरियाली उच्च सरकारी अधिकारीबिरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघन गरेको आरोपमा उनबिरुद्ध अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्धसँगै नेता किम जोङ उनलगाएत..
एकतिहाइ अमेरिकी आर्थिक चिन्ताले सुत्दैनन् २२ असार २०७३, बुधबार १६:०१
वासिङ्टन, २२ असार अमेरिकाको बेरोजगारी ४० वर्षकै न्यून कायम भएको छ । थोरै अमेरिकीले मात्रै यो अवस्थाबाट लाभ लिन सकेका छन् । नयाँ सर्वेक्षणअनुसार झन्डै तीनचौथाइले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताएका छन् । मार्केटप्लेस एन्ड एडिसनले मेमा सञ्चालन गरेको राष्ट्रव्यापी..
अमेरिकी अटो बिक्री दशककै उच्च २१ असार २०७३, मंगलवार १६:३१
वासिङ्टन, २१ असार पिकअप ट्रक र एसयूभीको बिक्री बढ्दा अमेरिकी अटो बजार जुन महिनामा एक दशककै उच्च कायम भएको छ । जनरल मोटर्सको बिक्रीमा आएको गिरावटका बावजुद अटो बिक्री उकालो लागेको होे । फमेर्ड मोटरले जुनमा अमेरिकामा गाडी बिक्री ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ४० हजार १..
यमुना अर्थात नदी जस्तो जिन्दगी २१ असार २०७३, मंगलवार १६:१२
शैलेश आचार्य, डालस, अमेरिका । जसरी सानोतिनो जोडबलले सपना साकार हुँदैन, त्यस्तै सजिलै आउन सकिने देश होइन सपनाको संसार अमेरिका । यहाँ आइसकेपछिका मुस्किल र चुनौती पनि आफ्नै खाले हुन्छन् । यत्ति हो कि यो देश संघर्ष गर्नेहरुका लागि चाहिँ पक्कै स्वप्निल छ । भारतका..
अमेरिकामा सवारी दुर्घटनामा नेपाली वैज्ञानिकको मृत्यु १८ असार २०७३, शनिबार १६:४६
ड्यालस (अमेरिका), १८ असार । अमेरिकामा एक नेपाली युवा वैज्ञानिकको दुर्घटनामा परेर निधन भएको छ । गोरखा जिल्ला घर भई अमेरिकाको मिजौरी राज्यको कोलम्बिया शहरमा बस्दै आएका ३३ बर्षीय किरण लामिछानेको शुक्रबार सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको हो । अमेरिकामा ‘रिसर्च..
बेलायतले ईयू छोड्ने पक्षमा गरेको मतदानले विश्वव्यापी वृद्धिमा समस्या आउने-ओबामा १८ असार २०७३, शनिबार १६:३०
वासिङ्टन, १८ असार अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बेलायतले ईयू छोड्ने पक्षमा गरेको मतदानले विश्वव्यापी वृद्धिमा समस्या आउने बताएका छन् । ब्रेक्जिटले बेलायत तथा युरोपमा हुने लगानीको सम्भावनालाई कम पार्ने बताए । उनले बेलायती प्रधानमन्त्री र ईयूका नेताहरूलाई..
चीनको आक्रामकता बढ्दै जाँदा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिप्रति समर्थन बढ्दै २५ असार २०७३, शनिबार ०५:४३
टिकटक माथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश २५ असार २०७३, शनिबार ०५:४३
अर्बौका मालिक ट्रम्पमाथि कर छलेको आरोप, एक दशकसम्म तिरेनन् आयकर ! २५ असार २०७३, शनिबार ०५:४३